Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Tooth Transplantation and Toothache: သွားမေးခွန်းများ
Tooth Transplantation and Toothache: သွားမေးခွန်းများ
Tue, Aug 14, 2012 at 6:36 AM
ဆရာရှင့် သွေးလှူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတခု ထပ်မေးပါရစေ။
- သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ သွေးလှူလို့ ရပါသလား။ ဘယ်အသက်အရွယ်လောက်ထိ လှူနိုင်ပါသလဲ။
- သွေးမဆုံးအောင် သွေးဆုံးချိန်ကို ဆွဲထားနိုင်အောင် ဆေးသောက်လို့ ရပါသလား။
- သွားအစားထိုးကုလို့ရပြီလို့ ကြားပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာပါလဲ။ ဘယ်လောက် ကုန်ကျနိုင်ပါသလဲ။ သွားအစစ်လို ဝါးလို့ကိုက်လို့ ရပါသလား။
Autogenous tooth transplantation (Autotransplantation) လူတယောက်တည်းမှာ တနေရာပေါက်နေတဲ့ သွားကို တခြားနေရာကို ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ ရွေ့စိုက်ပေးနည်း ပေါ်နေတာ ၁ဝ နှစ်မကကြာပါပြီ။ ဥပမာ အံသွားကို ရှေ့သွားနေရာရွေ့တာ။ စမ်းသပ်မှုအဆင့်ကနေ လက်တွေ့ လုပ်ပေးလာနိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်။ Autotransplantation နည်းက အောင်မြင်မှု အများဆုံးလို့ ဆိုတယ်။ ၅ နှစ်အထိ အောင်မြင်တာ ၉ဝ% ရှိတယ်။
Tooth Transplantation သွားအစားထိုးစိုက်ပေးခြင်းဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်သွားကို နေရာရွေ့စိုက်ပေးတာနဲ့ တခြားလှူသူရဲ့ သွားကို ရယူစိုက်ပေးတာ နှစ်မျိုးလုံးလုပ်နိုင်တယ်။ နည်း (၃) နည်းရှိတယ်။ (၁) Fixed bridgework (၂) Dental implants နဲ့ Removable partial dentures တို့ဖြစ်ကြတယ်။ ပညာပိုင်း အခေါ်အဝေါ်တွေလဲရှိပါတယ်။ Autogenous transplantation, Allogeneic transplantation, Isogeneic transplantation, Xenegeneic transplantation
၁၂-၇-၂ဝ၁၁ နေ့ ဂျပန်ကလာတဲ့သတင်းမှာ “Artificially grown tooth transplanted into mouse ကြွက်တွေကို စမ်းသပ်အောင်မြင်တယ်” ဆိုတာ ဖတ်ရတယ်။ ကြွက်သန္ဓေ (ဆဲလ်) မှာ သွားကို မွေးယူနည်း ဖြစ်တယ်။ Tokyo University of Science in Japan မှာ အောင်မြင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ အဲလိုမွေးယူရတာ ၂ လအချိန်ယူတယ်။ စိုက်ချင်တဲ့နေရာကို စိုက်ပေးတဲ့အခါ ရက်ပေါင်း ၃ဝ အကြာမှာ သွေးကြောတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေ ပေါက်လာတယ်။
ကုန်ကျစရိတ် မသိပါ။ သေခြာတာကတော့ သွားနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ဈေးကြီးပါတယ်။ လုပ်ပေးတဲ့သွားကလဲ ဝါးလို့ရမယ်။ သွားအထူးကုဆေးရုံကလဲ ဝါးပါမယ်။
“သွေးဆုံးချိန်ကို ဆွဲထားနိုင်အောင် ဆေးသောက်လို့ ရပါသလား” မေးခွန်းအတွက်
1. Menopause (1) သွေဆုံး-သားဆုံး (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2010/12/menopause.html
2. Menopause (2) သွေဆုံး-သားဆုံး (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/03/menopause-and-perimenopause.html တွေကို ဖတ်ပါခင်ဗျား။
၁၄-၈-၂ဝ၁၂ 6-3-2013 Facebook
Toothache: First aid သွားကိုက်ခြင်း ရှေးဦးသူနာပြုခြင်း
(၁) Self-care tips အိမ်မှာလုပ်နိုင်သည်များ
• Rinse your mouth with warm water ရေနွေးငုံပါ။ ရေနွေးနဲ့ ပလုပ်ကျဉ်းပါ။
• Use dental floss သွားရှင်းစရာနဲ့ သွားကြားထဲရှိနေတာတွေကို ရှင်းပေးပါ။
• OTC pain reliever to dull the ache ဆေးဆိုင်ကအလွယ်ဝယ်ရတဲ့ အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး တခုခုကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း သုံးပါ။
• OTC antiseptic containing Benzocaine ဆေးပါတဲံ ထည့်ဆေးကိုက်တဲ့နေရာမှာ ထည့်ပါ။
• Direct application of oil of cloves (eugenol) လေးညှင်းဆီသုံးနိုင်ပါတယ်။
(၂) Call your dentist ၂-၃ ရက်နဲ့ မသက်သာရင် သွားဆရာဝန်ကိုပြပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 9:37 AM